Aruba announces new Minister of Tourism, Public Health, and Sports | People making news
Ikhaya » izithuba » Abantu kuKhenketho noKhenketho » IAruba yazisa uMphathiswa wezoKhenketho, iMpilo yoLuntu kunye neMidlalo
Iindaba zokuhamba zeAruba • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Abantu benza iindaba • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zeMibutho yoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba eziShukumayo
IAruba yazisa uMphathiswa wezoKhenketho, iMpilo yoLuntu kunye neMidlalo
Februwari 26, 2018
UDanguillaume P. Oduber uqeshwe njengo-Mphathiswa omtsha wezoKhenketho, iMpilo yoLuntu, kunye neMidlalo kwisiqithi sase-Aruba. Njengenkokeli enobuchule kunye nesisa sobubele, uMnu.Danguillaume Oduber sisikhanyisi esiyilayo esizisa amava obuchule kunye nomnqweno kurhulumente waseAruba.
"Kulilungelo ukuvuyisana noMnu. Danguillaume Oduber ngokuqeshwa kwakhe njengo-Mphathiswa Wezokhenketho, iMpilo yoLuntu, kunye neMidlalo, kwaye siyamamkela kwesi sikhundla sihloniphekileyo," utshilo uRonella Tijn Asjoe-Croes, u-CEO we-Aruba Tourism Authority. "Ngokuzinikela ekusebenzeni ngokugqibeleleyo kunye nokukhula kwelizwe lethu, sijonge phambili ekusebenzeni noMnu. Danguillaume Oduber kwaye siqhubeke nokuphakamisa icandelo lezokhenketho lase-Aruba."
Ngemvelaphi eyahlukeneyo kubudlelwane bezopolitiko, uMnu Danguillaume Oduber umele isiqithi sase-Aruba njengelungu elihloniphekileyo lepalamente kuluhlu lweekomiti ezibanzi kubandakanya ezothutho, iziseko zophuhliso kunye nokusingqongileyo, ukhenketho, ezabasebenzi kunye necandelo lokuqala.
“Isiqithi saseAruba ngumnqweno wam kwaye ndiyabaxabisa abantu baso. NjengoMphathiswa wezoKhenketho, iMpilo yoLuntu kunye neMidlalo yesi siqithi, ndililiswa kukufumana ithuba lokukhokela nokukhuthaza ishishini elinzima kangaka. Kulilungelo elikhulu endizukileyo ukulenza, ”utshilo uDanguillaume Oduber, Umphathiswa Wezokhenketho, Impilo Yoluntu, kunye nezeMidlalo.
Ungene ngokusesikweni kwibala lezopolitiko phaya ngo-2013 njengelungu lepalamente, phambi kokuba ngu-Mphathiswa wezoKhenketho, iMpilo yoLuntu, nezeMidlalo ngo-2017. UMnu Danguillaume Oduber ngowase-Aruba kwaye uhlala ngokusisigxina kwesi siqithi nosapho lwakhe.